GADZIRISA WHATSAPP KUFONA KWETE KURIRA PANE ANDROID - NYORO
Gadzirisa WhatsApp Kufona Kwete Kurira pane Android
Ino inguva yeinternet mameseji uko zvese zvaunoda ndeye yakadzama internet kubatana uye neapp yakaiswa pane yako kifaa uye iwe unogona kuita chero chinhu! Mahara ekukurukura maapplication inzira dzakanyanya nyore dzekutaurirana nekuti a. vakasununguka uye b. unogona kutumira mameseji kune chero munhu uye munhu wese achishandisa zvakafanana app zvisinei nekwavari. Pakati pese ekutaurirana maapplication anowanikwa mumusika, hapana kana chero chirongwa chinofarirwa seWhatsApp.
Iyo yemahara, yakapusa, uye iri nyore kwazvo kushandisa. Kunze kwekutumira mameseji, mamwe maficha senge kudana kwezwi, kufonera vhidhiyo, kufona kwemusangano, kugovana mifananidzo, mavhidhiyo, zvinyorwa, mafaera, kutumira nzvimbo uye vanobatika, uye zvimwe zvakawanda zvinoita kuti WhatsApp ibatsire zvakanyanya uye chikamu chisinga tsanangurike chekutaurirana kwemazuva ano. Chinhu chakanakisa nezveWhatsApp ndechekuti zviri nyore kunhonga uye nekudaro chakakwanisa kuwedzera yavo mushandisi base kune yekare uye kwete yakadaro tech-savvy chizvarwa. Pasinei nezera rako kana kugona kwehunyanzvi, unogona kushandisa WhatsApp. Nekuda kweizvozvo, vanhu vanobva kumarudzi ese ehupenyu uye mamiriro ezvehupfumi nehupfumi vakamhanyira kuWhatsApp.
Zvisinei, pasinei nekuzivikanwa kwayo kukuru pakati pevashandisi, WhatsApp haina kukwana. Kungofanana neese mamwe maapp, haina kushanda dzimwe nguva. Bugs uye glitches vanowana yavo nzira mune yazvino kugadzirisa uye inokonzeresa dzakasiyana mhando dzezvinetso. Icho chingangova icho kana zvimwe zvisirizvo zvisirizvo zvinokanganisa neyakajairika mashandiro eapp. Muchikamu chino, tiri kuzokurukura rimwe dambudziko rakadai uye nekupa akasiyana magadzirirwo akafanana. Dambudziko reWhatsApp kufona isingaridze inowanzozivikanwa kukanganisa paApple. Zvinoita kuti zvisakwanisika kuziva kana iwe uchigamuchira foni uye nekudaro, iwe unomira mukana wekupotsa pane akakosha ane chekuita nebasa-kana wega mafoni. Dambudziko iri rinoda kugadziriswa pakutanga uye ndizvo chaizvo zvatichaita. Saka, ngatitangei kutsemuka.
Ongorora Ziviso Zvirongwa uye App Mvumo
2. Edza kushandisa Default System Ringtone
3. Bvisa Cache neData reWhatsApp
4. Bvisa WhatsApp kubva kuBattery Saver Zvibvumirano
5. Uninstall iyo App uye wozo Re-gadza
App yega yega inoda mvumo kubva kumushandisi kuitira kuti vatumire zviziviso kana kufona. Unofanirwa kuona kuti WhatsApp ine mvumo yese yainoda kuti ishande nemazvo. Kana zvirongwa zvekuzivisa zvisina kubvumidzwa saka foni yako haizorira kunyangwe iwe uri kufona. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuongorora maratidziro ekuzivisa uye mvumo yeWhatsApp:
1. Kutanga, vhura Zvirongwa pane yako kifaa.
2. Zvino, tinya pane iyo Zvirongwa sarudzo.
3. Zvino tsvaga WhatsApp kubva pane runyorwa rwemaapplication akaisirwa uye vhura iyo.
4. Pano, tinya pa Zvibvumirano sarudzo.
5. Zvino, ita shuwa kuti iyo kushandura switch padivi peTerefoni uye maSMS akavhurwa.
komputa yangu icon pane desktop
6. Mushure meizvozvo, buda paTender tab uye tora pane iyo Notifications sarudzo.
7. Pano, chekutanga ita chokwadi chekuti main toggle switch ye WhatsApp Notices yakavhurwa.
8. Mushure meizvozvo peta pasi uye vhura iyo Fona ziviso chikamu.
9. Pano, ita shuwa kuti iyo Rega ziviso sarudzo inogoneswa.
10. Uyezve ita chokwadi chekuseta Kukosha kune yakakwira uye Lock Lock zviziviso zvechigadziro zvakagadzirirwa kuratidza.
WhatsApp inobvumidza iwe kuseta yakajairwa ringtone kune yayo mafoni. Iwe unogona kunyange kuseta tsika kurira kune akakosha kutaurirana. Kunyangwe izvi zvichinzwika kunge zvinonakidza uye zvinonakidza pane chakakanganisika. Kuti ugadzire yetsika ringtone, iwe unofanirwa kushandisa odhiyo faira iyo imomo yakachengetedzwa pachigadzirwa. Kana netsaona kuti odhiyo faira ikadzimwa ipapo zvinogona kukonzera matambudziko.
Zvino, nekutadza WhatsApp inofanirwa kuchinjira kune yakajairwa ringtone kana isingakwanise kuwana iyo faira yetsika ringtone. Zvisinei, dzimwe nguva inokundikana kuzviita uye nokudaro haina kurira zvachose. Kana iwe uri kutarisana nedambudziko reWhatsApp risingaridze saka iwe unofanirwa kuedza kushandisa default system ringtone. Sezvo maratidziro ehurongwa asina kuchengetedzwa munharaunda yako pane chako kifaa uye asingakwanise kudzimwa anogona kugadzirisa iyo WhatsApp kufona isingaridze padambudziko reApple. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Vhura Zvirongwa pafoni yako.
2. Zvino tapira pa Zvirongwa chikamu.
3. Mushure maizvozvo, tsvaga WhatsApp uye tora pairi.
kurasa ndangariro dzepanyama kudiski
4. Dzvanya pa Notifications sarudzo kuvhura Notification marongero.
5. Pano, pfuurira pasi uye uzarure Fona ziviso chikamu.
6. Zvino tinya pane iyo Inonzwika sarudzo.
7. Tevere, sarudza Hapana kana chero eakagadzika masisitimu eroni kubva pane yakapihwa pazasi.
8. Cherekedza kuti kusarudza None kuchaita kuti WhatsApp iridze mhere ringtone iyo inotamba kana iwe uchigamuchira yakajairwa kufona. Kana pasina dambudziko ipapo ipapo sununguka kusarudza None neimwe nzira sarudza imwe default system ringtone.
Uyezve Verenga: Gadzirisa Zvakajairika Matambudziko neWhatsApp
Ese maapplication anochengeta imwe data muchimiro chemafaira ekuchengetedza. Dzimwe dhata dzekutanga dzinochengetwa kuitira kuti kana dzikavhurwa, iyo app inogona kuratidza chimwe chinhu nekukurumidza. Izvo zvinorehwa kudzikisa yekutanga nguva yechero app. Muchokwadi, social media apps senge Facebook uye chatting maapplication senge WhatsApp kana Messenger inochengetedza nzira yakawanda dhata muchimiro chemafaira ekuchengetedza kana ichienzaniswa nemamwe. Mune zvimwe zviitiko, WhatsApp cache uye data mafaera anogona kutotora 1 GB yenzvimbo. Izvi zvinodaro nekuti WhatsApp inoda kusevha machats edu ese uye meseji dzakabatanidzwa mazviri kuitira kuti tikwanise kuzviwana nekukurumidza patino vhura iyo app. Kuti tikwanise kusevha nguva yataizoshandisa takamirira kuti zvinyorwa zvedu zvitorwe, WhatsApp inovaisa nenzira yemafaira ekuchengetedza.
Zvino, dzimwe nguva mafaera ekare ekare anokanganiswa uye anokonzeresa kushanda kusanyanya kunyanya kana uine mafaera ekuchengetedza akawanda. Iyo inogara iri tsika yakanaka yekubvisa cache uye data remaapp. Zvakare, yakachengeteka chose sekuti cache mafaira anogadzirwa otomatiki kana iyo programu yakavhurwa inotevera nguva. Kudzima mafaera ekare ekare kunogonesa mafaera matsva kugadzirwa uye kutsiva ekare. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kujekesa cache uye data mafaera eWhatsApp uye netariro izvi zvichagadzirisa dambudziko:
1. Enda kune iyo Zvirongwa pafoni yako.
2. Dzvanya pa Zvirongwa zveapps kuti uone runyorwa rwemaapps akaiswa pane yako kifaa.
3. Zvino tsvaga WhatsApp uye tinya pairi kuti uvhure iwo marongero eapp.
4. Dzvanya pa Kuchengetedza sarudzo.
pamusoro 5 password kudzoreredza maturusi
5. Pano, iwe uchawana sarudzo kune Bvisa Cache uye Bvisa Dhata . Dzvanya pamabhatani akaringana uye mafaera ekuchengetedza eWhatsApp anozobviswa.
Chero mudziyo weApple une-in-yakavakwa bhatiri saver app kana chimiro chinotadzisa maapplication kubva kumhanya zvisina basa kumashure uye nekudaro inotaurisa simba. Kunyangwe chiri chinhu chinonyanya kubatsira chinodzivirira bhatiri rechishandiso kubva mukubuda, zvinogona kukanganisa mashandiro emamwe maapp. Izvo zvinoita kuti bhatiri saver yako irikukanganisa neWhatsApp neyakajairika mashandiro ayo. Nekuda kweizvozvo, haina kukwanisa kubatanidza kufona kana kusachema kunyangwe kana mumwe munhu achifona. Kuti uve nechokwadi, chinga gonesa bhatiri saver kwechinguva kana kuregedza WhatsApp kubva kuBattery saver zvinorambidzwa. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Vhura Zvirongwa pane yako kifaa.
2. Zvino tapira pa Bhatiri sarudzo.
3. Ita shuwa kuti iyo chinja switch padhuze neiyo simba-yekuponesa maitiro kana saver yebhatiri yakaremara.
4. Mushure meizvozvo, tinya pane iyo Kushandisa bhatiri sarudzo.
5 . Tsvaga WhatsApp kubva pane yakanyorwa maapplication uye tora pairi.
6. Mushure meizvozvo, vhura iyo app kumisikidza marongero.
7. Dzinga iyo Manage otomatiki kumisikidza wobva waita chokwadi chekugonesa iyo yekushandura switch iri padyo neAuto-kuvhura, Yechipiri kuvhura, uye Mhanya muNzvimbo.
bvisa zvachose norton kubva windows 10
8. Kuita izvi kuchadzivirira iyo Battery saver app kudzora mashandiro eWhatsApp uye nekudaro gadzirisa dambudziko reWhatsApp kufona kwete kurira pane yako Android foni.
Kana pasina imwe yenyaya dziri pamusoro nzira inoshanda, ingangove inguva yekutangisa nyowani. Edza kusunungura iyo app uye wozoisa zvakare. Kuita izvi nekumisazve zvigadziriso zvepurogiramu uye zvakashatiswa mafaira mafaira kana paine chero. Nekudaro, yako data haizobviswe sezvo ako machats uye midhiya mafaera akatsigirwa pamusoro pegore uye anozotorwa pasi iwe paunotangazve kuisa WhatsApp uye kupinda muakaunti yako. Kana dambudziko iri mhedzisiro yebug iripo muapp saka kuisazve iyo app kunobvisa iyo bug uye kugadzirisa dambudziko. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Vhura iyo Zvirongwa pafoni yako wozoenda ku Zvirongwa chikamu.
2. Tsvaga WhatsApp uye tora pairi wobva wadzvanya pane iyo Uninstall bhatani.
3. Kana app yangobviswa, download uye dzishandise Anwendung zvakare kubva kuGoogle Store.
4. Vhura iyo app wozopinda nenhamba yako yenhare.
5. Iwe unozokurudzirwa kurodha chat yekuchengetedza. Zviite uye kana zvese zvinhu zvatanga uye kumhanya bvunza mumwe munhu kuti akufonere uye uone kana dambudziko richiripo kana kwete.
Maitiro Ekuzvidzivirira Iwe paWhatsApp Kana Ukavharirwa
Gadzirisa Facebook Messenger Kumirira Network Error
Nzira yekugadzirisa UC Browser Zvakajairika Nyaya
Tinotarisira nemoyo wese kuti iwe unowana mhinduro idzi dzichibatsira uye wakakwanisa gadzirisa WhatsApp kufona isiri kurira pane Android . Nekudaro, kana iwe uchiri kutarisana nedambudziko rakafanana saka dambudziko riri paWhatsApp pachayo uye hapana chaunogona kuita nezvazvo.
Sezvambotaurwa, dzimwe nguva mamwe mabugs anopinda munzira nyowani inokonzeresa matambudziko seaya. Kana zviri izvo saka WhatsApp vagadziri 'timu inofanirwa kunge yatove pairi uye iyo bug fix ichaburitswa mune inotevera inovandudza. Ramba uchitarisa Play Store nguva dzese kune chero nyowani nyowani uye dhawunirodha kana yasvika. Kusvikira panguva iyoyo unogona kusarudza kurodha faira rekare reAPK uye kurimisikidza pane chako kifaa.
windows 10 kukwidziridzwa kunotadza kuisa
skrini inoshanduka nhema panguva yekutamba
maitiro ekuvharira internet kuwana
windows 10 yakanamatira pachiratidzo chekugamuchira mushure mekuvandudza
maitiro ekugadzirisa dns server windows 10
windows 10 yekuisa haina kutsigirwa